မူလနရော » Kagoshima
Updated: 2016-10-06 16:00
ရှုခင်း ကြည့် ရထား ( အထူး ဇိမ်ခံ တွဲ ၊ဟာရတိုနော့ခါဇဲ)
ဂျပန် နိုင်ငံ ကျူရှူး ပြည်နယ် ခါဂိုရှိမားခရိုင် ၊ ခါဂိုရှိမား ဗဟိုဘူတာကြီး နဲ့ ဟိစစွတ် လိုင်း ရော်ရှိမစွတ် ဘူတာ ကို ပြေးဆွဲ တဲ့ အထူး ရထား တစ်စင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရထား တစ် စီး လုံး ကတော့ အော ဘလ...
Updated: 2016-07-07 14:13
ချိရန်း ဂျပန်နိုင်ငံ ခါမိခါဇဲ လေသူရဲ တို့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးပြတိုက်
ချိရန်း ဒေသ သည် တိုင်းဟဲရောစစ်ပွဲ ( နေမ၀င်အင်ပါယာ ) အဆုံး ပိုင်းလောက် မှာ စစ်တပ် ရဲ့ အသေခံတိုက်ပွဲ ဗျူဟာဌာနချုပ် အဖြစ် ထား ရှိ ခဲ့ တဲ့ မြို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပြတိုက်မှာ ဆိုရင်...
Updated: 2016-06-16 16:32
ခါဂေါမ ဖုရုစတို ရထိုင်းမူရ ( လမ်းဘေးစားသောက် ဆိုင် )
ခါဂေါမ ဖုရုစတို ရထိုင်း မူရ မှာ ၊ နာဂို ရာ မှာရှိ တဲ့ ရာသီ စာ အစားအသောက် တို့ကို အထူး ပြု ရောင်း ချပြီး ဂျပန် အရက် ကို ဈေးအသင့် အတင့် နဲ့ ရောင်း ချ နေတဲ့ လမ်းဘေး ဆိုင် လေး တွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
Updated: 2016-06-16 15:17
ခိရိရှိမား ကိုးဂဲန်း မာဟိုရောဘိုနော့စတို
သဘာဝ စကိတ် ကွင်း ၊ ဂေါက် ကွင်း နဲ့ လဲ့ရှင်း ကတ် အစရှိ တဲ့ အားကစား ကွင်း ၊ အဆောက် အဦး တွေ နဲ့ ဖန်သား အနု ပညာ အစရှိ တဲ့ အမျိုး မျိုး သော အရာတွေ က တစ်နေရာ ထဲ မှာ စု စည်း နေပါ တယ်။ စား သောက်ဖွယ...